Ephathekayo scrubber ultrasonic for ekuhlanzeni ubuso: Umsebenzisi
Hardware yokuhlanza umuntu - inqubo, okuyinto ejabulela Ukuthandwa kwezindlela phakathi izivakashi beauty salon. Ngaphezu kwalokho, lokhu uhlanzekile kwenziwa imishini yobuchwepheshe futhi zibiza. Ukuze afeze yokuhlanza ebusweni e umshini ultrasound ekhaya ngesikhathi esifanayo ukonga, idivayisi angathengwa esitolo okukhethekile noma nge-Internet.
Omunye amadivayisi kangcono ubuso yokuhlanza kuyinto scrubber professional ultrasonic. Ukusetshenziswa Its kungenzeka hhayi kuphela ubuhle salon imvelo, kodwa futhi ekhaya. Lokhu ukuhlanzwa ebusweni - yindlela enhle ukuqeda ngokweqile isikhumba greasiness, pores ebhuqwini isikhumba izinhlayiya efile we epidermis. Eqinisweni, le ephathekayo scrubber ultrasonic - block encane kokuba enze uphenyo kude spatula metal, okuyinto element eyinhloko apharathasi. Ngalesi lento ngocansi ultrasonic wave oscillation imvamisa abantu abangu-20 kHz. pulses ezinjalo ayibonakali iso womuntu, kodwa ngempela lubonakale isikhumba ebusweni.
Ukuze afeze izinqubo ezifana wokuhlanza abantu ultrasound kufanele kube izinkomba. Kulokhu, scrubber ultrasonic angeke asebenzise zonke wobulili bubuhle, kodwa okwengeziwe ukuthi kamuva. Ngakho, inkomba for isidingo ultrasound yokuhlanza.
porosity okwandisiwe isikhumba;
encishisiwe isikhumba ithoni bese isikhumba turgor;
ukuqubuka, induna in a sigaba ngizolile;
Inhlanganisela noma isikhumba oily;
ukujuluka okusezingeni eliphezulu;
zibuthuntu ibala ebusweni.
uphawu ngalunye eyedwa noma inhlanganisela kungase kube inkomba esibaluleke ongenambangi okuhlanza isikhumba usebenzisa ultrasound scrubber ubuso.
Njenganoma iyiphi uhlobo izinqubo yezimonyo, uyaxebuka ultrasonic enezinto eziningi Izimo ukusetshenziswa. It is hhayi Kunconywa ebukhoneni:
izinqubo ukuvuvukala kule ubuso ifomu acute;
pathologies kohlelo zenhliziyo;
kwezinso zezinzwa Izinzwa zangaphandle.
Lapho ukungenelela kuhlinzwa adluliselwe ku isikhumba ebusweni kungaba ezinye kabi, kodwa kwamukelekile ukusebenzisa scrubber.
Izinqubo eziyisisekelo ultrasound ukuchayeka
Ultrasound - ongabonakali wave kunyakaza, ezisetshenziswa emikhakheni ehlukahlukene umsebenzi womuntu. Angazi uhlale eceleni futhi Cosmetology. Ukuvevezela enjalo kuthiwa ngobulili emitter phezu kwesikhumba, kulesi simo osebenza scrubber ultrasonic. Lapho uyisebenzisa, izingqimba engenhla dermis wadalula ephezulu imvamisa nokudludliza, okuyinto ukukhuthaza ukuhlukaniswa amangqamuzana afile Horny we ebusweni isikhumba bese kokukhipha ezingcolisa ezihlukahlukene, kanye ungqimba ebusweni msebenzi obalulekile. A kancane wave oscillation amandla ngocansi apharathasi awukwazi nganoma iyiphi indlela ukulimaza isikhumba.
Uyaxebuka - ukuhlanzwa ezijulile ebusweni epidermis. Ukusebenzisa ultrasound scrubber ubuso njengoba uyaxebuka umshini oza ebusweni dermis mini-Jets of ejenti liquid uyaxebuka nge ukusebenza kahle eliphezulu ukuze ukungena ezimbotsheni nokususa noma yimaphi ama ezingcolisa, ngaphandle nomphumela omuhle ikhava jikelele, ekuqedeni sebum ngokweqile kanye efile stratum amaseli corneum. Lokhu kwelashwa ehlanza ngokujulile futhi ngesikhathi esifanayo uyasondla isikhumba nge-oksijini.
Ngaphezu ukuhlanzwa, isikhumba kudinga ukwanda kwegazi, okuyoba neqhaza kwelulama ngoba imihuzukwana. Micro-massage - Enye inqubo ukuthi engenziwa ekhaya ephathekayo scrubber ultrasonic.
Kunezinhlobo eziningana kwethonya micro-massage:
Mechanical. amagagasi ezinjalo zayithinta ukudluliselwa oscillations ngokusebenzisa ungqimba kancane elangeni, gel noma ngezinye izindlela ngaphambilini isetshenziswa ngaphansi kwesikhumba. Inqubo yenzeka micromassage ezijulile izicubu ezithile ebusweni, inkanuko cell ukuvuselelwa, isikhumba wokuhlanza futhi ekuthuthukiseni kuyaqina of dermis kwezicubu zezinzwa.
Massage ikhuthaza ukubhidlika collagen ethandele, nakho nethonya elihle esikhumbeni futhi kwenze kube nokunwebeka ngaphezulu.
umthelela Thermal oguqula amandla acoustic ukufudumeza izicubu, ethuthukisa kwegazi futhi ukusheshisa ukusabela kwamakhemikhali, oyenza redox izinqubo, yakha serotonin kanye nezinye izinto asebenzayo begazi okushintsha isikhumba pH, ugqugquzela zamagama collagen futhi mithambo ine-elastin.
umphumela amagciwane. Ultrasound ikhuthaza ukuthuthukiswa lymph, ezisabalele izinto eziwusizo amaseli isikhumba.
Phonophoresis - a potentiation izidakamizwa ngethonya ultrasonic kunyakaza isikhumba amaseli precoated namadivayisi wezokwelapha. Ngakho, umuthi ngeke ukungena izingqimba ezijulile dermis, eside isinyathelo esikhumbeni futhi inciphise amathuba okuba nemiphumela engemihle.
Pulse uhlobo micromassage inikeza okusezingeni eliphezulu lymph amanzi futhi nokuphakamisa umphumela.
Indlela ukukhetha scrubber?
Ukuze unqume ukuthi ukukhetha scrubber ultrasonic, landela lezi zincomo. Uma kungukuthi kunakwe, kungenzeka ngokushesha give up on insimbi, ultrasonic scrubber ukuthenga. Umhlahlandlela ine lonke ulwazi oludingayo wena, ngakho-ke kufanele nakanjani abheke ngaphakathi kuwo. Naka ngokukhethekile kufanele kube ku idatha elandelayo:
Umkhiqizi. Khetha izimpahla kungaba kusuka abakhiqizi owaziwa, kodwa nge ukuthenga scrubber ultrasonic Russian ezenziwe, ungathola imodeli eliphezulu, futhi ngesikhathi esifanayo ezinhle londoloza.
Security. Idivayisi kumele uthobele yonke imithetho namazinga izinga, ukuba imvelo, futhi ngenxa yalokho iphephile ukuyisebenzisa.
Design kanye nemishini. Khetha i-model umhlabeleli elenziwe elisekela imininingwane engadingekile, kulula ukuyisebenzisa.
Ubukhulu. Iyunithi amancane engasindi kuyisinqumo esingcono kakhulu ukusetshenziswa ekhaya.
Amandla. Ayanda score, ngcono scrubber ultrasonic uzozigcwalisa imisebenzi yayo. Inzuzo elingenakuphikwa idivayisi kuyodingeka ngesivinini amaningi evumela yokuhlanza okujula obuhlukahlukene.
Ukuze uthole idivayisi multifunction, kufanele uthenge yembobo professional scrubber ultrasonic. Nale imodeli kungenzeka ngempumelelo ukufeza yokuhlanza, ionization, pilingovat isikhumba futhi toning kubo. Lokhu kuyokunika nethuba lokuthola cishe zonke izinqubo yezimonyo ezifana salon ekhaya.
Intengo kwemishini for yokuhlanza professional ubuso izinga okuhle, ngokuvamile eliphezulu. Ngakho-ke kangizidingeli ukuthenga scrubber engabizi ultrasonic. I elikhulu kungaba umshini maphakathi no-ontengo yakhe yayinqunyiwe. Ukunamathela lezi umehluko wemisindo nemiqondo yamagama, ungakhetha izinga yokuhlanza machine for uyaxebuka ubuso ngesikhathi intengo imali nokuqhuba ukwelashwa salon ekhaya.
Indlela ukuqhuba kweseshini ultrasonic yokuhlanza umuntu?
Izinqubo zokulungisa kusetshenziswa amagagasi ultrasonic ngokuvamile awadingi ukulungiselela ekhethekile. Kodwa uma kuze kube manje izenzo ezinjalo ngesikhumba akubanga ngisho nakanye nje, kudingeka ufunde izinyathelo eziyisisekelo.
Ukuhlanza. Oku-ukuhlanza isikhumba kusukela izimonyo etholakalayo, kanye ukusebenzisa khuhla omnene ukususa sobala ezingcolisa dermis.
Inqubo kushunqe iyadingeka ngaphambi yokuhlanza ultrasonic, nokuziphatha massage mnene kufanele kube ukulungiselela isikhumba isenzo amagagasi.
Phakathi apharathasi uhlanzekile zisebenzisa ekhethekile okhilimu, lotions noma si, athuthukisa imithelela ultrasound. Ngokuhlanza session ekunqanyulweni kufanele usetshenziswe isikhumba ukhilimu okunomsoco, pre-ofakwe ubuso ngendwangu emanzi, wesula yome.
Kuye isimo kwesikhumba, kanye ngesonto noma ngisho inyanga, ungasebenzisa ikhaya scrubber ultrasonic. Izibuyekezo cosmetologists Asinikezi ukuqondiswa ngokuvamile yini ukusebenzisa kudivayisi akudingekile, kusukela zokukhwabanisa kungabangela ukulimala esikhunjeni. Omunye inqubo akufanele kuhlale isikhathi eside kunaleso amaminithi 15, kanye ikhefu njalo ngemva kwemizuzu engu-5.
kuphela ukwelashwa salon noma Kukhona okwakungenziwa?
Sebenzisa umshini ultrasound kungaba hhayi kuphela endlwaneni eyakhiwe. Ocwaningweni ezikhethekile ukwenza inqubo enjalo wenziwa cosmetologists professional izinhlelo ngabanye, kodwa izindleko zokuhlinzwa ezinsizakalweni ezifana kuyinto ngempela umxhwele. Ngokuthenga idivayisi professional, ungenza konke manipulations ekhaya, kodwa kuqala kumele uxhumane nge onguchwepheshe.
Uma izinkinga zesikhumba mabi ngempela, kubalulekile ukuba avivinye owandulelayo ukuzwela, ngoba ngisho best ultrasound scrubber akuqinisekisi ukusetshenziswa uphephile ku inkinga isikhumba.
Kunoma ikuphi, ukusetshenziswa ultrasound for yokuhlanza dermis kuyindlela enhle balahle izinkinga eziningi ngesikhumba futhi sithuthukise isimo sayo.
Saina futhi Signe - kuyini?
Uwoyela Jojoba kusukela imibimbi azungeze amehlo: ukubuyekezwa. Ukusetshenziswa kukawoyela Jojoba ngokuba ubuso
Indlela ukususa ububomvu induna kanye ukuvimbela ukubukeka ukuqubuka kwesikhumba
Itheku arrhythmia - kuyini? Izimbangela nezimpawu arrhythmias inhliziyo
Styler "Bebilis" ngoba curls: Izibuyekezo
SSD-esitolo Samsung 850 Evo: ukubuyekezwa, izincazelo, izincazelo kanye nokubuyekezwa
Indlela yokugcwalisa isitatimende sezinguquko ngokulingana: Imfundo
Izimiso eziyinhloko zokubusa ngesimiso sokusebenzela uhulumeni. Izimiso zokubusa ngesimiso sokusebenzela uhulumeni ngekhulu le-19
MSG - Ubuthi okumnandi kakhulu